Asia Coronavirus COVID-19 Vaovao farany: Fameperana ny dia, toe-javatra ankehitriny
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Asia Coronavirus COVID-19 Vaovao farany: Fameperana ny dia, toe-javatra ankehitriny
Fanavaozana an'i Asia momba ny Coronavirus COVID-19: Fepetra amin'ny dia sy toe-javatra ankehitriny
Tamin'ny fiandohan'ny volana Janoary 2020, nisy vondron'olona trangana pnemonia izay tsy fantatra ny antony hita tany Wuhan City, Hubei, Sina. Ny vokatr'izany Coronavirus (COVID-19 dia nitarika tranga 95,000 voamarina manerantany. Amin'ireo tranga voamarina ireo, ny totalin'ny "sitrana" dia efa ho 54,000. Hatramin'ny tapaky ny volana febroary dia nitombo be ny tahan'ny fanarenana (mihoatra ny 50%), raha ny tranga vao notaterina kosa dia mihisatra mazava ny isany. Ny fanavaozana an'i Asia Coronavirus COVID-19 dia navoakan'ny Destination Asia (DA).
Amin'ireo toerana 11 tohanana ny DA, tsy mbola misy tranga voamarina hoe COVID-19 any Myanmar, Laos, na ny nosy Bali. Thailand, Vietnam, Kambodza, ary Malezia dia nanoratra tranga latsaky ny 110 voamarina miaraka - olona 70 no efa sitrana tanteraka. Ny Ivotoerana Amerikanina misahana ny fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC) tamin'ny 27 febroary dia nanala an'i Vietnam tsy ho ao anatin'ny lisitry ny toerana mora tohina amin'ny famindrana ny fiarahamonina COVID-19, manonona ny hetsika feno ataon'i Vietnam manohitra ny valanaretina.
Singapore sy Hong Kong dia nandrakitra tranga maherin'ny 100 monja avy, ary Japon manakaiky ny 330. Torohevitra momba ny Asia Coronavirus COVID-19 dia manondro ny fandinihana indray ireo dia tsy ilaina rehetra mankany Chine hatramin'ny Mey. Ho an'ny toerana hafa rehetra, ny DA dia mitantana famandrihana toy ny mahazatra. Mitohy toy ny mahazatra ny fiainana any amin'ireny toerana itodiana ireny, ary ankoatran'i Shina, dia mora foana ny mitety faritra.
Afa-tsy an'i Sina, ny drafitry ny dia rehetra dia afaka mitohy amin'ny ara-dalàna. Tsy nisy fameperana fitsangatsanganana navoakan'ny OMS na ny governemanta nasionaly teo anelanelan'ny toerana hafa ao amin'ny portfolio-nay. Raha tokony hofoanana ny dia kasaina hatao, dia nanoro hevitra ny DA ny hamerenana ny fotoana.
Mamaly fanontaniana momba ny COVID-19
Ho an'ny toro-hevitra farany momba ny fiarovana sy fiarovana, ny WHO dia manolotra horonan-tsary fampahalalana marobe sy fanamarihana azo pirinty azo sintonina avy Eto.
Ny WHO koa dia manome tatitra momba ny toe-javatra isan'andro misy tarehimarika manokana momba ireo tranga voamarina sy fizarana COVID-19. Ny farany (4 martsa) farany azo jerena Eto.
Fanavaozana ny fameperana ny dia amin'ny ankapobeny
Ny fanavaozana Asia Coronavirus COVID-19 momba ny fameperana ny dia amin'izao fotoana izao mifandraika amin'ireo firenena manerana ny tambajotra DA dia natambatra tamin'ny hametrahan'ny ankamaroan'ny fetra ny fivezivezena avy any Shina.
Ny mpitsangatsangana rehetra na inona na inona zom-pirenena avy any amin'ny tanibe Shina miditra ao Hong Kong dia takiana hiditra amin'ny quarantine mandatory mandritra ny 14 andro. Izany koa dia mihatra amin'ireo mpandeha nitsidika ny faritra Emilia-Romagna, Lombardy na Veneto any Italia na Iran tao anatin'ny 14 andro lasa. Tsy avela hiditra ireo mpandeha nitsidika an'i Korea Atsimo tao anatin'ny 14 andro taorian'ny nahatongavany tany Hong Kong. Ny Lehiben'ny mpanatanteraka dia nanambara ny fampiatoana ny serivisy fifindra-monina ao amin'ny Kai Tak Cruise Terminal sy ny Ocean Terminal, ka tsy misy sambo fitsangantsanganana horaisina raha tsy averina. Amin'izay fotoana izay dia nikatona ny fiampitana sisintany rehetra, afa-tsy ny toeram-pisavana iraisana ao amin'ny Bay Bay, Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge ary ny seranam-piaramanidina iraisampirenena. Amin'izao fotoana izao, Hong Kong Disneyland, Ocean Park, Ngong Ping 360 Cable Car, ary ny Jumbo Floating Restaurant dia nakatona mandra-pahatongan'ny fampandrenesana fanampiny.
FANAMARIHANA: Nanambara ny famerenana ny fandaharam-potoana famerenana ny lalao katolika Pacific / HSBC Hong Kong Sevens ny World Rugby. Ny fifaninanana, amin'ny 3-5 aprily tany am-boalohany, dia hatao ao amin'ny Kianja Hong Kong manomboka amin'ny 16-18 Oktobra, 2020.
Noraran'ny kabinetran'ny fanjakana Sabah sy Sarawak ny sidina rehetra avy any Shina. Tsy napetraky ny tanibe Malaysia ny fandrarana. Nanambara ihany koa ny fanjakana Sarawak fa na iza na iza miditra any Sarawak izay efa tonga tany Singapour dia tsy maintsy iharan'ny quarantine an-trano mandritra ny 14 andro. Ireo teratany vahiny rehetra izay nitsidika ny tanànan'i Daegu na County Cheongdo any amin'ny Faritanin'i Gyeonsang Avaratra ao amin'ny Repoblikan'i Korea, ao anatin'ny 14 andro aorian'ny fahatongavany any Malezia (ao anatin'izany i Sarawak) dia tsy avela hiditra. Ny fitantanana ny KLCC dia mitaky ny mpitsidika rehetra ao anatin'izany ny ankizy sy ny zaza hameno ny taratasy Fanambarana ara-pahasalamana alohan'ny hitsidihana ny Skybridge any Kuala Lumpur (manomboka ny 29 febroary) mandra-pahatongan'ny fampandrenesana fanampiny.
Teratany vahiny izay nitsidika ny faritanin'i Hubei sy / na Zhejiang any Shina; na Daegu City na Cheongdo County ao amin'ny Faritanin'i Gyeonsang Avaratra ao amin'ny Repoblikan'i Korea, ao anatin'ny 14 andro aorian'ny fahatongavany any Japon, dia tsy avela hiditra. Raha mila vaovao farany momba ny toerana nakatona ao Japon izao dia mifandraisa amin'ny mpanolo-tsaina Destination Asia Japan anao.
Nanambara ny governemanta Indoneziana ny fandrarana ny sidina mankany sy amin'ny tanibe Shina ny 5 febroary ho avy izao ary tsy hamela ireo mpitsidika izay nijanona tao Chine tao anatin'ny 14 andro lasa mba hiditra na handalo. Naato vonjimaika ny politikan'ny visa-maimaim-poana ho an'ny olom-pirenena sinoa.
Ny fahefana fiaramanidina sivily ao Vietnam dia nampiato ny sidina rehetra eo amin'ny tanibe Shina sy Vietnam. Ireo mpandeha amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka avy any amin'ireo firenena misy tranga COVID-19 voalaza fa tsy maintsy mandefa fanambarana ara-pahasalamana rehefa miditra any Vietnam. Mbola mihidy ny vavahady sisintany manelanelana an'i Vietnam sy Sina any amin'ny faritany avaratr'i Lang Son. Seranam-piaramanidina maromaro no nampiato ny sidina vonjimaika eo anelanelan'i Korea Atsimo sy Vietnam. Ireo teratany vahiny rehetra izay nitsidika ny tanànan'i Daegu na County Cheongdo any amin'ny Faritanin'i Gyeonsang Avaratra ao amin'ny Repoblikan'i Korea ao anatin'ny 14 andro dia tsy hahazo miditra.
Ireo teratany vahiny izay nitsidika an'i Chine tanibe, Iran, avaratr'i Italia na Korea Atsimo, ao anatin'ny 14 andro aorian'ny nahatongavany tany Singapour dia tsy avela hiditra na handalo.
Nampiato vonjimaika ny làlana maromaro mankany Shina ny Lao Airlines. Natsahatry ny governemanta Lao ny famoahana visa mpizaha tany amin'ny toeram-pisavana manodidina an'i Shina.
Fanambarana iray navoakan'ny Minisiteran'ny Fahasalamana tany Thailand tamin'ny 3 martsa lasa izay niteraka fisafotofotoana. Ny fanambarana dia nanondro an'i Alemana, France, Italia, Iran, China, Taiwan, Macau, Hong Kong, Singapore, Japan, ary South Korea no voasokajy ho atahorana indrindra, ary ny quarants dia avy amin'ireo faritra ireo no hohamarinina. Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy nampiharina izany. Raha te hanana tatitra momba ny fizahan-tany farany lavitra indrindra avy any Thailandy, azafady mba jereo ny tranokalan'ny Tourism Authority of Thailand.
Amin'izao fotoana izao, tsy misy fameperana ny dia eo amin'ireo firenena ireo sy i Sina.
Raha mila horonan-tsary bebe kokoa sy torohevitra momba ny fepetra fiarovana manohitra ny COVID-19 dia tsidiho ny Tranonkala WHO.
Fanambarana Saint Lucia momba ny fizahantany momba ny tranga COVID-19 Coronavirus
Fanovana ny etihad Airways miaraka amin'ny fidiram-bola mitentina US $ 506 miliara